स्वास्थ्य रहन बिरुवाको महत्व साथैःफुर्सदमा बिरुवा हाम्रा साथी पनि - Icatch Khabar
पढ्ने समय:7मिनेट/-
आधुनिकता र व्यस्त ता संग गाजिएको हाम्रो जीवनलाई यस लकडाउनले निकै फुरसदिलो र नयाँ सोच गर्ने समय प्रदान गरेको छ । यस लकडाउनको अवधि अझ लम्बिन सक्नेछ । पहिले पहिले(पहिले मानिसहरु इच्छा भएता पनि आफ्नो घर आगनमा रहेका बोट बिरुवाहरुमा चाहे जति आफ्नो समय दिन पाउदैन थिए तर आजकाल देख्न सकिन्छ मानिसहरु आफ्नो बाजो रहेका खेत, बारीहरुमा काम गरिरहेका हुन्छन् । झन् खेत–बारी नहुनेहरु त कौसी खेती,गमलामा फुलबिरुवा रोपी फुलबारी बनाउने तर्फ समेत लागि रहेका छन् । गमलामा फुलबारी बनाउनका लागि मानिसहरुले कायौं किसिमका फुलका बिरुवाहरु साथै साज–सज्जाका लागि उपयुक्त हुने खालका बिरुवा पनि रोप्ने गरेका छन् । आजकाल सबै आ–आफ्नो घर भित्र बस्नु परेको अवस्थामा बिरुवाहरु निकै राम्रा साथिको रुपमा प्रस्तुत भएको छ । उनीहरुको हेरचहा गर्ने कार्यले मानिसलाई समय व्यत्तित गर्न केही सहज भएको छ । फूल–बिरुवाको रहर भए पनि रोप्नेदेखि हुर्काउने र स्याहारसम्मका झमेलाले कतिपयले समय र जाँगर निकाल्न सक्दैनन् त्यस किसिमको व्यतिहरुका लागि यस समय निकै फलदायी भएको छ ।
अझ हाम्रो समाजमा त कृत्रिम फूल नै भए पनि यसले मानिसको जीवनमा सक्रियता बढाउँछ भन्ने चलन छ । यसले नकारात्मक ऊर्जा हटाउनमा सहायता गरी मन सुगन्धित बनाउनुका साथै मानसिक सन्तुलन गराउँछ । नकारात्मक ऊर्जा सन्तुलित गर्छ । फूलले वृक्ष–तत्व प्रतिनिधित्व गर्छ । वृक्षले उन्नति, विकासको फैलावट गर्ने हो । त्यसैले फूल आफ्नो व्यवसायिक स्थल, अफिस, घरवरिपरि हुनु स्वास्थ्य र सम्पन्नताका लागि महत्वपूर्ण मानिने भएकाले पनि होला मानिसहरु आजकाल घर र कोठा भित्र फुल बिरुवा रोप्ने जस्ता कार्य गर्न थालेका छन् । यस्ता बोट बिरुवाहरु खासै महंगा पनि हुदैनन् । स्वास्थ्यका लागि पनि निकै फाइदा जनक हुन्छन् ।
एक तथ्यांक अनुसार प्राय हामी मानिसहरु दिनको ७०–८०% आफ्नो समय कोठा भित्र बिताउने गर्द थियौ भने लकडाउनका कारण हाम्रो पूर्णत समय जस्तै कोठा भित्रनै रहने गरेको छ । कोठा भित्रको वायु प्रदुष्ण बाहिरको भन्दा निकै धेरै रहन्छ । झन् त्यो माथी हामी प्राय नेपालीहरुको घर वैज्ञानिक विधिबाट बनेको पनि हुदैन जस्ले गर्दा कोठाहरुमा पर्याप्त मात्रामा हावा आवत–जावत हुन पनि पाउदैन र घामका किरणहरु पनि छिर्न सक्दैनन् । जस्ले गर्दा ठूला–ठूला स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउ छ ।
घरमा रोपेको विरुवाले घरको सौन्दर्य त बढाउँछ नै, शुद्ध अक्सिजनको उत्पादन गरी मानिसलाई विभिन्न रोग लाग्नबाट समेत बचाउँछ भन्ने पूर्वली सभ्यतामा निकै अगाडि देखि भनिदै आएको कुरा हो । घरमा रोपिने यस्ता रुख विरुवा ‘एयर प्युरिफायर’को समेत काम गर्छ, जसले गहिरो निद्रा लगाउनुका साथै घरमा सकारात्मक उर्जा प्रवाह गर्दछ र मानिसलाई शान्त बनाउछ । नासाका वैज्ञानिकहरुले ९०को दशकमा यस सम्बन्धी अनुसन्धान गरी पुष्टि समेत गरिसकेका छन् ।
फेरी बिरुवाहरुको हेरचहा जनावरको सरी महंगो र झन्झटिलो पनि हुदैन । सबै बिरुवाहरु कोठा भित्र राख्न भने सकिदैन, त्यसका लागि केही निश्चित बिरुवाहरु छन् । केही बिरुवाहरु त हाम्रो घर आसपासका झाडी, बगैचा, बाटो वरपर देखि रहेका पनि हुन्छन् ।
विज्ञहरु बताउछन् कोठाको अवस्था हेरी कोठा भित्र उचित स्थानमा बिरुवाहरु राख्न सके अझ बिरुवाहरु मज्जाले आउने र अक्सिजन उत्सर्जन राम्रो संग हुनेछ । साथै भिन्न किसिमका बिरुवाहरु भए अझ राम्रो हुनेछ । केही बिरुवाहरुलाई घामको प्रत्यक्ष उज्ज्यालो आवश्यक रहन्छ भने कुनैलाई अप्रत्क्ष भएपनि हुन्छ । भने उन्यू प्रजातीका बिरुवाहरुमा उज्ज्यालो नभएपनि फरक पर्दैन ।
हरेक बिरुवाहरुको आफ्नो विशेषता रहेका छन् । अधिकांश प्लान्टले रातको समयमा कार्बन्डाइ अक्साइड फाल्ने हुँदा अक्सिजनमा कमी आउन सक्छ । त्यसैले कोठा अनुसार विरुवाको विशेषता पनि याद राख्नु पर्दछ । केही यस्ता बिरुवाहरु पनि छन् जस्ले रातको समयमा पनि अक्सीजन उत्सर्जन गर्छ ।
ति मध्ये केही
छाला सम्बन्धि विभिन्न समस्यामा एलोभेरा अर्थात घिउकुमारी लाभदायक मानिन्छ । त्यसैले त, सौन्दर्यका विभिन्न प्रशाधनहरुमा एलोभेराको प्रयोग अधिक हुन्छ । एलोभेराको प्रयोगबाट छालामा सुन्दरता ल्याउन्का साथै यसले निद्रा लग्न समेत मद्धत गर्छ । सानो तिनो चोटपटक तथा पोलेको घाउमा औषधीको काम गर्ने एलोभेराले रातको समयमा अक्सिजन छोड्छ, जसले गर्दा अनिद्राको समस्या हटेर जान्छ । यो सुर्यको किरणमा रमाउने बिरुवा प्राय हामी नेपालीहरुको घर आसपासमा सहजै पाइन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस बाहिरबाट रामपुर भित्रिने तरकारी, फलफूल र मासु निरुत्साहन
यत्रतत्र छरिएको यसको पत्ताबाटै यस वोटको पहिचान गर्न सकिन्छ । यस्लाई नेपाली समाजमा सेतो दुबोको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ । स्पाइडर प्लान्टले क्यान्सर गराउने तत्वको विकास गर्ने हानीकारक रसायनबाट वातावरणलाई शद्ध राख्न मद्दत गर्छ । साथै, यसले वातावरणको दुर्गन्ध नष्ट गरी आरामदायी निद्रा दिलाउन मद्दत गर्छ । ओसीलो मन पराउने यस बिरुवालाई सुर्यको किरण खासै चाहिदैन । यो बिरुवालाई घरको घाम नर्पे भागमा राख्दा पनि राम्रो संग आउन सक्छ ।
यसको वनोट नै सर्पो जस्तो हुनाले यसको नाम स्नेक प्लान्ट रहन गएको हो । यो विरुवा निकै कम स्यहारमा पनि हुर्कन सक्ने विरुवा हो र सूर्यको किरण अप्रत्यक्ष रुपमा भए पनि राम्रो संग हुर्कन सक्छ । अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था नासाले हालै गरेको एउटा अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ ‘सबभन्दा बढी अक्सिजन दिने बिरूवा स्नेक प्लान्ट रहेछ। नासाको अध्ययन अनुसार यसले हावामा भएको प्रदूषण कम गर्न मद्दत गर्छ। यो विरुवाले रातको समयमा अक्सिजन दिनुका साथै हानिकारक केमिकल जस्तै बेन्जीन, फर्मलदिहाइड,टाउलीन,जाईलिनलाई पनि अवशोषित गर्न सक्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस नेपालमा कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम !
हिन्दु धर्ममा पवित्र मानिने तुलसी पनि कोठा भित्र राख्न सक्निछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न समस्यामा तुलसीको प्रयोग हुने गर्छ । तुलसीलाई विभिन्न औषधीको खानी पनि भन्ने गरिन्छ । त्यसैले त, गीत नै छ, ‘तुलसी आँगनमा रोपौंला ।’ हुन पनि तुलसीलाई घर आगनमा रोप्नको धार्मिक र आध्यात्मिक मात्र हैन, औषधि महत्व पनि छ । घरको आँगनमा तुलसी रोप्दा वातावरण शुद्ध हुनुका साथै यसले रुघाखोकी, ज्वरो, दुखाईलगायतमा समेत शरीरलाई आराम दिन्छ । टाउको दुखेमा तुलसीको पात पिसेर टाउकोमा लगाउनुस्, टाउको दुखाई निकै हदसम्म कम हुन्छ । तुलसीको पातको लेप बनाएर अनुहारमा लगाउँदा कोमल हुनुकासाथै सुन्दर देखिन्छ ।
ओस मन पराउने यस बिरुवालाई सुर्यको प्रत्यक्ष किरणमा राख्न मिल्ने किसिमको बिरुवा हो । एक ठूलो रुखको रुप लिन सक्ने यस बिरुवाले हाम्रो वातावरणमा रहेका फर्मलदिहाईडलाई सोस्नु सक्छ । समय समयको हेरचहा अवस्यक पर्ने यस बिरुवालाई घाम र पानीको मात्रा निकै मिलाएर दिनु पर्छ ।
आजकल सहजै भेट्न सकिने यस बिरुवा स्वास्थ्यको दुष्टिकोणले पनि निकै फलदायी छ भने यसलाई सजावटको तरिकाले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो बिरुवाले हावामा ओस बनाई राख्न ठूलो काम गर्छ । फर्मलदिहाइड,बेनजिन जस्ता हानिकारक तत्वभएको हावालाई शुद्ध पर्ने काम गर्छ । यो विरुवा पिनासका रोगीहरुका लागि पनि निकै फलदायी छ । यो बिरुवालाई ठिक्क मात्रामा घाम र माटोको नमी हेरी पानी भए पुग्छ ।
यी थिए रातको समयमा पनि अक्सिजन उत्र्सजन गर्ने बिरुवाहरु भने अन्य केही कोठा भित्र राख्न मिल्ने बिरुवाहरु
पानी अमला, पिस लिली, सक्लुसेन्ट ,क्रोटन, क्याक्टस, एक्जोरा, बोन्साइ, कोलियस, अर्केरिया, बोगेनबेलिया, र्फन .
कोठा भित्र बिरुवाहरु राख्दा फाईद त निकै छन् भने केही चुनौती पनि हुन्छन् जस्तै:-
–कतिपय मानिस इन्डोर प्लान्टबाट निस्कने रसायनप्रति संवेदनशील हुन्छन्। त्यसबाट उनीहरूमा एलर्जी, डाबर तथा फोका निस्कन थाल्छ। कुनै बिरुवामा भएको पदार्थले आँखा, नाक आदि पाचन प्रक्रियामा असर पार्छ। त्यसैले बिरुवा राख्दा आफ्नो घरमा भएको मानिसहरुलाई सुहाउदो बिरुवा छन्नु पर्छ ।
-समय–समयमा गमलाको माटो जाँच गर्नुपर्छ। कुनै गमला फोहोर भएको तथा माटोमा कीरा लागेको वा गन्हाउने भएको छ भने माटो बदल्नुपर्छ।
-कतिपय अवस्थामा बिरुवा विस्तारै बढ्छन् तथा कमजोर हुन्छन्। यसका साथै पात पनि सामान्यभन्दा साना हुन्छन्। यस्तो स्थितिमा गमलालाई फराकिलो ठाउँमा राख्नुपर्छ।
-कनै पनि बिरुवालाई हुर्कन तथा बढ्न उचित तापमानको आवश्यकता पर्छ। गमलामा बिरुवा हुर्काउँदा यस विषयमा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ। गमलाका बिरुवाका पात सुक्न लागेका छन् भने समय–समयमा पानी हाल्नुपर्छ। यसका साथै गमलालाई समय समयमा पर्याप्त घाम लाग्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ। पात सुकेर सड्दा घरमा नराम्रो गन्ध आउन सक्छ। यस्तो स्थितिमा जीवाणु फैलने डर हुन्छ। त्यसैले बिरुवाका पात तथा हाँगामा कीरा लागे औषधि छर्कनुपर्छ।
अघिल्लो लेखमागणतन्त्र दिवस, आत्मसमिक्षा गर्ने दिन
अर्को लेखमालकडाउन आगामी जेठ ३२ गतेसम्म लम्बियो, सीमानाका र विमानस्थल असार १३ गतेसम्म नखुल्ने